अदुवा आयातभन्दा बढी निर्यात | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण अदुवा आयातभन्दा बढी निर्यात
अदुवा आयातभन्दा बढी निर्यात
नेपालबाट विदेशमा निर्यात हुने कृषि उपजमध्ये अदुवा पनि एक हो । व्यापार सन्तुलनको दृष्टिले यसको महŒव बढी छ । थोरै नै किन नहोस्, आयातभन्दा निर्यात नै बढी हुन्छ । त्यसैले केही आशा गर्न सकिने नेपाली उत्पादनका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । विना कुनै अवरोध सहज किसिमले निकासी हुनसक्ने वातावरण भने बनाउनुपर्छ । आयात केकस्तो परिस्थितिमा भएको छ, प्रकृति बुझेर प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
भन्सार विभागको विगत केही वर्षको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकलाई आधार मानी यहाँ अदुवाको आयात तथा निर्यात दुवै पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
तथ्यांकले देखाए अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा रू. ४५ करोड ४८ लाख मूल्यको अदुवा निर्यात भयो । उक्त वर्ष रू. ७ करोड १३ लाख मूल्यको अदुवा आयात भएको थियो । आव २०७२/७३ मा रू. ६४ करोड २८ लाख मूल्यको अदुवा निर्यात भएको थियो । त्यही वर्ष करीब रू. ३३ करोड मूल्यको आयात भएको थियो । विगत ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी आयात यसै वर्षमा भए तापनि व्यापार सन्तुलनका दृष्टिले रू. ३१ करोड ३० लाख निर्यात नै बढी देखिन्छ । आव २०७३/७४ मा रू. २४ करोड १७ लाख मूल्यको निर्यात भयो । करीब रू. १६ करोड मूल्यको आयात भएको थियो । यस वर्ष आयात र निर्यात दुवै न्यून रहेको थियो तैपनि करीब ८ करोडले निर्यात बढी नै भयो । गत आव २०७४/७५ मा सर्वाधिक बढी अर्थात् रू. ७७ करोड १३ लाख मूल्यको निर्यात भयो भने आयात तुलनात्मक रूपले निकै कम अर्थात रू. ८ करोड ७१ लाख मूल्यको भएको थियो ।
अदुवाको आयात वा निर्यात विभिन्न रूप वा प्रकारमा हुने गरेको छ : जस्तो कि १. नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा २. नटुक्याइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) ३. टुक्रा पारेको वा पिँधेको अदुवा ।
अदुवाको रूप वा प्रकार अनुसार कुन देशबाट के कति आयात भयो त ?
आव २०७१/७२ मा रू. ७ करोड १३ लाख मूल्यको अदुवा आयात भएकोमा करीब रू. ६ करोड ३५ लाख मूल्यको नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) छिमेकी भारतबाट आयात भयो । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पनि ४१ लाख र रू. ३३ लाखको टुक्रा पारेको वा पिँधेको अदुवा तथा नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा सोही देशबाट आयात भएको थियो ।
आव २०७२/७३ मा रू. ३२ करोड ९८ लाख मूल्यको अदुवा आयात भएकोमा रू. १८ करोड ६७ लाख मूल्यको नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा छिमेकी देश चीनबाट आयात भयो । नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) करीब रू. १३ करोडको भारतबाट तथा करीब रू. ८३ लाखको यही रूपको अर्थात् नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) चीनबाट आयात भएको थियो ।
आव २०७३/७४ मा रू. १५ करोड ९८ लाख मूल्यको अदुवा आयात भएकोमा चीनबाट रू. ९ करोड ४९ लाख मूल्यको नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा आयात भयो । भारतबाट नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) रू. ५ करोड ३२ लाख मूल्यको तथा यही रूपको अर्थात नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) रू. ४८ लाख मूल्यको चीनबाट आयात भएको थियो ।
यसैगरी आव २०७४/७५ मा रू. ८ करोड ७१ लाख मूल्यको अदुवा आयात भएकोमा सबैभन्दा बढी भारतबाट रू. ८ करोड ३९ लाख मूल्यको नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) आयात भयो । भारतबाट नै टुक्रा पारेको वा पिँधेको अदुवा रू. १७ लाख मूल्यको तथा नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा रू. १३ लाख मूल्यको चीनबाट आयात भएको थियो ।
निर्यातका सम्बन्धमा आव २०७१/७२ र सोभन्दा पछिका वर्षहरूमा नेपालबाट निर्यात हुने अदुवाको रूप वा प्रकारमा नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको ताजा अदुवा नै मुख्य रूपमा देखिन्छ तर आव २०७२/७३ मा नटुक्य्राइएको वा नपिँधेको अन्य अदुवा (सुठो) रूपको अदुवा सबैभन्दा बढी निर्यात भएको थियो । यी सबै निर्यात हुने प्रमुख देश भारत नै रह्यो । यी वर्षहरूमा अदुवा निर्यात भएका अन्य देशहरूमा चीन, युक्रेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि प्रमुख रहेका थिए । आव २०७४/७५ मा भने प्रमुख रूपमा भारत र यसका साथै जर्मनी, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स् आदि देशहरूमा निर्यात भएको थियो ।